Tuesday February 26, 2019 - 22:14:01 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Super Admin
Madaxweynaha dowlada federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maalin kahor magaalada Sharma Sheikh ee dalka Masar kula kulmay reysulwasaaraha dalka Denmark, Lars Løkke Rasmussen.
Sida uu qoray wargeyska Berlingske, madaxweyne Farmaajo iyo reysulwasaaraha Denmark ayaa ka wada hadlay qodobo ay kamid yihiin dib u celinta qoxootiga soomaaliyeed ee ku sugan dalka Denmark, aana heysan magangalyada rasmiga ah. (Hoos ka akhri qoraalka wargeyska oo af danish ah)
Wargeyska ayaa mar kale xaqiijiyay inuu jiro isfahan iyo wada shaqeyn u dhaxeyso dowladaha Soomaaliya iyo Denmark, kuna aadan celinta qoxootiga Soomaalida ah ee aan magangalyada ku heysan dalka Denmark ama aan helin degenaanshaha rasmiga ah.
Reysulwasaaraha Denmark Lars Løkke Rasmussen ayaa sii raaciyay in Soomaaliya ay rabto in heshiiskaas uu ahaado mid qarsoon, aana laga bixin faah-faahin. Sidaas darteed ayuu diiday inuu faah-faahin ka bixiyo nooca heshiis oo ay la galeen Soomaaliya, una ogolaanaya inay qoxootiga dalkaas aan magangalyada ku heysan ay Soomaaliya dib ugu celiyaan.
Denmark iyo Soomaaliya ayaa horey marar badan u diiday inay jiraan isfahan, heshiis ama wadashaqeyn ku aadan celinta qoxootiga soomaalida ah ee aan dalkaas magangalyada ku heysan. Laakiin warbaahinta dalka Denmark ayaa soo bandhigtay qoraalo iyo documentiyo cadeynayo in Soomaaliya ay Denmark la gashay isfahan ku aadan suurtogalnimada in la celin karo qoxootiga soomaaliyeed ee aan magangalyada ku heysan Denmark.
Wasiir katirsan xukuumada reysulwasaare Lars Løkke ayaa isbuucyo kahor diiday inuu jiro wax heshiis ah oo u dhaxeeyo labada dal. Laakiin reysulwasaare Løkke ayaa hada xaqiijiyay inuu jiro isfahan labada dowladood dhexdooda ah.
Reysulwasaaraha Denmark ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu u xaqiijiyay inuu rabo in qoxootiga soomaalida ah ay dalkooda dib ugu noqdaan, ayna ka qeyb qaataan dib u dhiskiisa.
Wargeysyada Denmark ayaa sidoo kale maqaalada ay arintan ka qoreen ku xusay marar badan in Madaxweyne Farmaajo uu heysto dhalashada dalka Mareykanka, uuna wax ku bartay dalkaas.
Isbuuc kahor ayuu sidoo kale wasiirka arimaha dibada, Axmed Ciise Cawad oo ku sugnaa dalka Sweden uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay qaabisho soomaalida diidmada ka heysata sharciyada magangalyada.
Halkan ka Akhri warkan oo KU Qoran Afka Denmark